Product Description Description: caaga Rapid wadanay aragti: 600 * 300 * 200mm dulqaad: +/- 0.05 daaweynta oogada mm: Hand qiraan Color, caddaan ama caadada Codsiga: Product Industrial maxaad noo dooran? Waxaan bixinaa xal one-stop adeegyada wadanay degdeg ah! Youde ku hormartay khadadka-soo-saarka processing noocooda degdeg ah. Waxaan leenahay awood wax soo saarka xoog badan, xarumaha machining CNC, ...
Shipping Port: Shenzheng ama HongHong
Time Lead: 5 ~ 12 maalmood
Item No: wadanay 17052601
Shuruudaha Payment: 50% Deposit la PO, 50% ka hor dhalmada
Description: caaga Rapid wadanay aragti: 600 * 300 * 200mm
+/- 0.05 mm, dulqaad daaweynta oogada: nadiifinayo Hand
Color, caddaan ama caadada Codsiga: Product Warshadaha
Waxaan bixinaa xal one-stop adeegyada wadanay degdeg ah!
Youde ku hormartay khadadka-soo-saarka processing noocooda degdeg ah. We have powerful manufacturing capability, CNC machining centers, 3D Printing, plus auxiliary equipment like milling machine, Sand Blasting Machine, drilling machine etc and the cooperation of our partners, we are able to support every different components of the prototyping
In ka badan 11-sano oo ganacsi iyo waayo-aragnimo wax soo saarka.
Si Small waa la heli karaa
qiimaha habboon adeegga Good Sare.
shaqo adag oo ka mid ah shaqaalaha kooxda QC balan qaadayo tayada deggan.
Habeysan maray siinta wax soo saarka for design Custom iyo si OEM.
1. Custom CNC Machining Service: Habee cayn machining ee qaybo bir ah iyo qaybo ka mid caag ah sida aad sawirka ama sawirCustom
2. adeegyada Custom 3D Daabacaadda: waxaan si dhaqso leh magaalada Nyala oo soo saarta karo iyo SLS si waafaqsan waxyaabaha looga baahan yahay.
3. Custom silikoon ridaya Vacuum caaryada: Waxaan bixinaa maxkamadda si yar adeegyada ay maamulaan in aad by caaryada silicone shubay vacuum.
4. Samee wataa qoraalka koowaad: Ku soo dhawow dhigi noocooda ah
OUR AWOODDA wadanay DEGDEG AH
CNC machining, daabacaadda 3D (Nyala), Silicon shubay caaryada, goynta laser, Laabista iwm
ABS, PC, PP, PMMA, PE, POM, PA, Rabadhka, silikoon, iwm
Aluminum, ama waxyaabo kale: naxaas ah, Maarta, Copper, ahama Steel.
Size: 2000 * 1200 * 1000mm ama kartoo
feature wadanay (qaabka)
Kartoo, waxaan machining kartaa feature adag
Rinjiga, polish, xariir-print, anodize, dusha hufan, dusha translucent, burush, saliid caag, electroplate.
files Available qaabab
.stp / .pdf / .xt / .Talaabada ./. billabo / .dxf / .igs / .prt / .stl / .sldprt
YOUDE string waa quduus uga dhigeen si wadanay degdeg ah muddo 11 sano ah, waxaan leenahay waayo-aragnimo qani ah oo ah adeegidda laga wadanay degdeg ah, waxaan ku siin kara xal ku haboon la machining CNC, 3D daabacaadda, silikoon Qaab ridaya Vacuum, tooling Rapid sida aad sawirka iyo waxyaabaha looga baahan yahay, and make your idea be prototype in few days, it can save the cost and time for you.
Waxaan si taxadar leh ku siin doonaa talo xirxirida ama xirxirida sidaad u baahan yahay.
Waxaan kuu diyaarin karnaa in ay uga samatabbixin karaa by oogeen / FedEx / UPS iwm ama sida ay looga baahan yahay qofka macaamilka ah ee.
Ku soo dhawow oo nala soo xiriir, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan u buuxiyaan shuruudaha aad!
Previous: Adeegga wadanay Fast caaga
Next: wadanay High polish aluminium dusha
CNC Rapid wadanay
caaga Rapid CNC Machining
caaga Rapid CNC Machining Factory
Small Lacagta CNC Rapid wadanay
CNC Machining caaga string Xakamaynta Remote